Miyuu Kevin De Bruyne ka tagayaa Manchester City kaddib markii Kooxdiisa laga ganaaxay tartammada Yurub? - Hargeele - Wararka Somali State
Miyuu Kevin De Bruyne ka tagayaa Manchester City kaddib markii Kooxdiisa laga ganaaxay tartammada Yurub?
(Manchester) 15 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa labo xilli ciyaareed laga ganaaxay ciyaaraha Yurub, haddaba miyey taasi ku hoggaamin kartaa inuu ka tago ciyaaryahankeeda Kevin De Bruyne?.
Ganaaxa labada xilli ciyaareed ah ee kooxda Manchester City laga ganaaxay Champions League ayaa la soo sheegayaa inay Kevin De Bruyne ku hoggaamin karta inuu ka fikiro mustaqbalkiisa garoonka Etihad.
Kooxda haysata horyaalka Premier League ayaa labada xilli ciyaareed ee soo aaddan laga ganaaxay ciyaarayaha Yurub kaddib markii lagu helay inay jabisay xeerka dhaqaale wanaagga ee Financial Fair Play.
Man City ayaana xaqiijisay inay racfaan ka qaadan doonto go’aankan, inkastoo ay wali tahay in la arko inay awood u leeyihiin inay ka laabtaan ganaaxan oo ay ku guuleystaan racfaankooda.
Sida uu warinayo Wargeyska The Sun haddii kooxda ay ka maqnaato Champions League labada sano ee soo socota markaas De Bruyne waxa uu ka fiirsan doonaa mustaqbalkiisa Sky Blue.
Xiddiga xulka qaranka Belgium ayaa markale qaab ciyaareed wanaagsan ku jira waxaana uu bandhig wacan ka sameynayaa Kooxda Pep Guardiola xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay 7 gool, isla markaana diiwaangeliyay 18 caawin 31 kulan oo uu saftay tartammada oo dhan.
28-sano jirkaan ayaa heshiiskiisa kooxda Manchester City waxa uu ku eg yahay xilli ciyaareedka 2022-23.
Barcelona oo Albaabada u furtay inay bisha Janaayo iska iibiso mid ka mid ah xiddigaheeda
Erling Haaland oo u sheegay Kooxda Man United inuu doonayey inuu iyaga ku biiro… (Maxaase isbadelay?)
Kooxaha Arsenal iyo Tottenham oo ku tartamaya laacib ka dheela Premier League… (Booskee ka ciyaaraa?)